Shirweynihii Qaran ee Qoraxeey oo Maanta ka Bilowday Degmada Qabridahare – Rasaasa News
Oct 3, 2010 eritrea out, Ogaden, ONLF, peace, Shirweynihii Qaran ee Qoraxeey oo Maanta ka Bilowday Degmada Qabridahare, somalia
Shirkii mudada badan laga shin tirinayey ee nabadaynta iyo dib u heshiisiinta ururadii dagaallada ka waday dalka [ONLF], dawlada degaanka iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya, ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Qabridahre.
Magaalada Qabridahare ayaa lagu qiyaasay tirada dadka ku nool in ay tahay 40,000 oo ruux sanadkii 2006. Balse tiradaasi ay aad hoos u dhacday saddexdii sano ee ugu dambaysay iyada oo gaadhay 29,241 ruux, hoos u dhacaas tirada dadka ayay ugu wacan tahay colaada ka jirtay gabalka.
Labadii todobaad ee ugu dambayay tirada dadka u soo hoyday magaalada Qabridahare ayaa lagu qiyaasay in ay gaadhay 120,000 oo ruux. Dadkaas oo hora baxanyo u ahaa shirweynaha Qaran ee maanta ka bilowday magaalada Qabridahare.
Jabhada ONLF, ee nada la gashay dawlada dhex ee Itobiya ayaa si ay u xaqiijiso hirgalinta heshiiska nabada ee la filayo in ay dhawaan qalinka ku duugto, waxay shir ku qabtay Tuulada Gar-go,an oo ahayd meeshii lagu aas aasay cwxo. Shirkaas oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa lagu marti qaaday masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida. Arintan oo ay Jabhadu uga dan leedahay in bal horta ay is calool xaadhaan walaalaha uu dagaalku u dhaxeeyey.
Waxaa isna maanta [sabti 2,2010] furmay shirweynihii Qaran ee Qabridahare oo la doonayo in ay isku calool xaadhaan ama ay isku ilmeeyaan qoyska Somalida ah ee Dawlad Degaanka Somalida, Jwxo iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo ay dhibaato dhexmartay.
Masuuliyiin ku hadlaysa afka Dawlada Degaanka Somalida iyo Masuuliyiin ku hadlaya Ururka ONLF oo wada jira, ayaa hortagay shacabweynaha Somalida Ogadeeniya, waxayna waydiisteen cafis iyo saamaxaad wixii ay dhibaato gaadhsiiyeen shacabka. Waxaa kale oo ay masuuliyyinta labada dhinac balan qaadeen in dhibaato dambe dheef mooyee ayna u gaysan doonin dadweynaha degaanka.
Odayaal ku hadlayay magaca dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa si kalsooni iyo calool wanaag ah waxay uga aqbaleen masuuliyiinta labada dhinac ee cafiska waydiistay dadweynaha. Odayaasha ayaa yidhi “ninkii walaalkii dilay isagaa garab madhan, ninkii hooyadii dilayna isagaa hooya la,aan ah.” Laakiin waa lama huraan in aan dhibaato dambe dadweynaha loo gaysan.
Shirka Qabridahare ayey maalintiisa 1aad ka hadleen dad badan, hadlka ayaa waxaa uu u badnaa waana iyo isu caqli celin [peace and reconciliation] ay saddexda dhinac soo jeediyeen. Suldaanka Degaanka ee Absame ayaa waxaa uu yidhi “walaalo is nacay way xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan.” Wax badan baan damcay in aan isa soo horfadhiiyiyo walaalaha dagaalamay, waxaase maanta ii rumoobay riyo aan wakhti badan sugayey.
Shirkaweynaha Qaran ee Qabridahare ayaa la filayaa in uu socon doono mudo toban maalmood ah, si ay dadku u hurgufaan calool xumada haysay 16 sano iyo dhibaatooyinkii ay u gaysteen labada dhinaca ee uu dagaalku u dhaxeeyey.
Kalsoonida iyo farxada ka muuqata dadweynaha shirka ka qayb galaya iyo guud ahaan dadweynaha magaalada jooga ayeyna hore u soo marin wali farxadan iyo calool wanaagani. Waxaana ugu dambaysay baa la leeyahay talo sidan u farxad galisa dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo isku talo ah xiligii Nuur Cabudhiye. Xiligaas oo sida la sheego uu isku talo ahaa dadweynaha gabalkan degaa, guushii waagaasna ilaa maanta ayaa laga sheekeeyaa.
Warar hoose oo aanu ku deg degnay ayaa sheegaya in rag muhiim ahaa oo hore uga tirsanaan jiray ururka ONLF, horayna lugta dib u dhigayey in ay haatan safar ku jiraan oo ay tagayaan dhulka hooyo.
Shirweynaha Qaran ee Qabridahare oo xiiso gaar ah u leh dadweynaha Somalida Ogadeeniya, lana filayo in uu soo afjaro calool xumadii ay beereen Caasmara iyo odayga cadka ee cida ka dhashay ayaanu maalin walba idinla socodsiindoonaa isbadalkiisa.
Qayb 2aad, Daawo Wufuudii ONLF, oo Gaadhay Addis Ababa iyo Dire Dawa